Xildhibaan Cabdirisaaq: ”Ragga muddo xileedkoodu dhamaaday, dalka Meel xun ayay dhigeen”. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xildhibaan Cabdirisaaq: ”Ragga muddo xileedkoodu dhamaaday, dalka Meel xun ayay dhigeen”.
Xildhibaan Cabdirisaaq: ”Ragga muddo xileedkoodu dhamaaday, dalka Meel xun ayay dhigeen”.
Wasiirkii hore ee amniga qaranka ee Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo la hadlay Mustaqbal ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in haatan dalka loo qorsheeyo Ciidamo ka kala socda Midowga Afrika & Qaramada Midoobay sabab la xiriirka kalsooni darada Amniga Dalka.
Xildhibaan Cabdirisaaq waxa uu Madaxda Dowladda Federaalka ee Muddo xileedkoodu dhamaaday ku eedeeyay in dalka meel ay dhigeen kadib markii Ciidanka Qaranka ay u adeegsadeen dano gaar ah sida uu hadalka u dhigay.
4-tii sano ee muddo xileedka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu sheegay in Dowladda Federaalka aanay dejin wax qorshe ah oo lagu hagaajinayo diyaargarowga la wareegidda mas’uuliyadda Amniga iyo hoggaaminta howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
“Waa Fashilaad weyn in Dowladda Soomaaliya ku guuldareysato la wareegidda amniga, xitaa Doorashada laguma haleyn karo Ciidamada Soomaalida waxaa loo baahan yahay in lagu biiriyo Booliiska AMISOM, warbixinta Guddiga Midowga Afrika waxa ay niyadjab u tahay mustaqbalka Soomaaliya, afartii sano ee dowladda waxba lagama qaban diyaarinta Ciidanka la wareegaya mas’uuliyadda Dalka” ayuu yiri Xildhibaan Cabdirisaaq.
Dhanka kale rajada baajinta Ciidamada loo qorsheeyay Soomaaliya waxa uu ku xiray isbadal ka dhasha Doorashooyinka lagu wado in ay dhacda ka dhacaan, si loo helo Dad ka shaqeeya qorshaha kala guurka ee bixitaanka AMISOM.
Dowladda Federaalka ayaa gaashaanka ku dhufutay warbixin kasoo baxday Guddi madax bannaan oo katirsan Ururka Midowga Afrika oo dalbaday in wax laga badalo qorshaha bixitaanka AMISOM maadaama aanay diyaarsaneen ciidanka Soomaalida ee mas’uuliyadda kala wareegi lahaa sida Warbixintooda ku xusan.
Previous articleLabo walaalo ah oo ku dhintey wabiga iyo dil ka dhacay magaalada Beledweyne
Next articleTirada dadka ku dhintay daadadka Jarmalka iyo Belguim ayaa gaaraya 170 qof